रगत नपाउँदा सुदुरपश्चिममा सुत्केरीलाई सास्ती |
रगत नपाउँदा सुदुरपश्चिममा सुत्केरीलाई सास्ती
सुरक्षित सुत्केरी सेवा नपाउँदा एकवर्षमा ३८ को मृत्यु
प्रकाशित मिति :2015-07-31 12:09:45
कैलाली, साउन १५। सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सञ्चालित आकस्मिक प्रसूति सेवा रगत अभावमा प्रभावित भएका छन्। सुदुरपश्चिमका नौ जिल्ला मध्ये दार्चुलाबाहेक सबै जिल्लामा आकस्मिक प्रसूति सेवा सञ्चालन भएपनि रगत अभावमा उपचार गर्न नसकिएको स्वास्थ्यकर्मीले वताएका छन्।
कैलाली, कञ्चनपुरबाहेक पहाडी ६ जिल्लामा सञ्चालन भएका आकस्मिक प्रसूति सेवामा रगत नपाईने भएकाले सेवा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक पर्शुराम श्रेष्ठले वताउनुभयो।
रक्तसञ्चार केन्द्रहरू स्थापना नभएका कारण रगत नपाउने समस्या भएकाले दुर्गममा यो सेवा सञ्चालनमा निकै समस्या भएको उहाँले वताउनुभयो। बाजुरा, बैतडी, बझाङ, अछाम जिल्लामा रगत नपाइने मुख्य समस्या रहेको छ। रगत नपाउँदा बैतडी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट महिनामा एकदुई जनालाई जनालाई रिफर गर्नुपरेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. गुण राज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो।
‘८५ प्रतिशत महिला सामान्य सुत्केरी हुन्छन्, १५ प्रतिशत महिलालाइ अप्ठ्यारो हुने गरेको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत महिलालाई रगतको आवश्यक पर्नेगर्छ’ अवस्थी भन्नुहुन्छ। आकस्मिक प्रसूति सेवा भएका जिल्लामा सेना र प्रहरीलाई गुहार मागेर रगत माग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउने गर्छन्।
बैतडी जिल्लामा आकस्मिक सेवा सञ्चालन भएपछि शल्यक्रिया भएका ६० जना महिला मध्ये ४८ जनालाई शल्यक्रियापछि सैनिकहरूले रगत दिएको डा. गुणराज अवस्थीले वताउनुभयो। दुर्गम जिल्लामा आकस्मिक प्रसूति सेवा स्थापना गर्नै गाह्रो हुने र त्यो भन्दा ठूलो समस्या रगतको व्यवस्था गर्न भईरहेको क्षेत्रीय निर्देशक श्रेष्ठले वताउनुभयो।
ती जिल्लामा रक्त संचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले यसको पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। रगत नपाँउदा स्वास्थकर्मी स्वयंले रगत दिनु परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका बरिष्ठ अहेब टेक बहादुर खड्काले वताउनुभयो। बिरामीलाई रगत आबश्यक परेमा रगत खोज्नु पर्ने समस्या रहेको छ।
उहाँका अनुसार नागरिकलाई रगतदान सम्बन्धि चेतना नभएकाले रगत दिन नमान्ने गरेको खड्का वताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ ‘श्रीमतीलाई रगत आवश्यक पर्दा श्रीमानले समेत रगत दिदैँनन्।’
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा सुदुर पश्चिममा ३८ जना महिलाले समयमै सुरक्षित सुत्केरी सेवा नपाएर ज्यान गुमाएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरि ०६९/०७० मा ८० जना र ०६८/०६९ मा ५२ जना आमाको समयमै सुत्केरी सेवा नपाएर ज्यान गएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ।
प्रकाशित मितिः २०७२ साउन १५ गते शुक्रवार